Indhaha iyo isticmaalka kombutarka | Somaliska
Isticmaalka komburada iyo guud ahaan qalabka elektroniga ee shaashadaha leh waxay qatar ku noqon karaan indhahaaga haddii aan loo isticmaalin si taxader leh. Halkaan waxaa idinkugu soo bandhigayaa dhowr qodob oo aad raaci karto si aad u ilaaliso caafimaadka indhahaaga markaad isticmaalayso komburada. 1. Fariiso meel ku haboon – kursiga aad ku fariisato, qaabka aad u fariisato markaad kombutarka isticmaaleyso waxay ka qeyb qaadan karaan caafimaadka indhahaaga. Ku fariiso kursi aad ku raaxaysan karto, isticmaal shaashad balaaran, marnaba indhahaaga haku qasbin wax aysan aqrin karin. Guud ahaan sameyso qaab fadhi kugu haboon oo aadan dareemeyn wax culeys ah. 2. Iftiinka goobka - Aad ayuu muhiim u yahay qodobkaan, koobta aad ku isticmaaleysid kombutarka waa in ay lahaataa iftiin fiican, isticmaal leyrar iftiinkooda uu fiicanyahay oo uusan dafiic ama saaid ahayn. Layrka haisku soo jeedin, dhabarkaagana ha dhigin ee meesha dusha ayaa ku haboon. Sidoo kale iska fiiri iftiinka ka imaanaya kombutarkaaga, isticmaal sawir aan indhaha u dhib badneyn desktopkaaga. farta kombutarka waaweynayso haddii aad u baahato. 3. Indhaha isku qabo & kana kac fadhiga – Markaad isticmaaleyso komburada dabeecad ka dhigo in aad indhaha isku qabato oo aad sameyso ilbiriqsi dhowrkii daqiiqada. Sidoo kale markaad xoogaa fadhido isaga kac kombutarka oo xoogaa socsoco si ay indhahaaga u nastaan. Mowduucyo la xiriira teknolojiyada oo kan la mid ah waxaad kala socon kartaa bogeena kale ee http://www.casriga.com
Indhaha iyo isticmaalka kombutarka
Isticmaalka komburada iyo guud ahaan qalabka elektroniga ee shaashadaha leh waxay qatar ku noqon karaan indhahaaga haddii aan loo isticmaalin si taxader leh. Halkaan waxaa idinkugu soo bandhigayaa dhowr qodob oo aad raaci karto si aad u ilaaliso caafimaadka indhahaaga markaad isticmaalayso komburada.
1. Fariiso meel ku haboon – kursiga aad ku fariisato, qaabka aad u fariisato markaad kombutarka isticmaaleyso waxay ka qeyb qaadan karaan caafimaadka indhahaaga. Ku fariiso kursi aad ku raaxaysan karto, isticmaal shaashad balaaran, marnaba indhahaaga haku qasbin wax aysan aqrin karin. Guud ahaan sameyso qaab fadhi kugu haboon oo aadan dareemeyn wax culeys ah.
2. Iftiinka goobka – Aad ayuu muhiim u yahay qodobkaan, koobta aad ku isticmaaleysid kombutarka waa in ay lahaataa iftiin fiican, isticmaal leyrar iftiinkooda uu fiicanyahay oo uusan dafiic ama saaid ahayn. Layrka haisku soo jeedin, dhabarkaagana ha dhigin ee meesha dusha ayaa ku haboon. Sidoo kale iska fiiri iftiinka ka imaanaya kombutarkaaga, isticmaal sawir aan indhaha u dhib badneyn desktopkaaga. farta kombutarka waaweynayso haddii aad u baahato.
3. Indhaha isku qabo & kana kac fadhiga – Markaad isticmaaleyso komburada dabeecad ka dhigo in aad indhaha isku qabato oo aad sameyso ilbiriqsi dhowrkii daqiiqada. Sidoo kale markaad xoogaa fadhido isaga kac kombutarka oo xoogaa socsoco si ay indhahaaga u nastaan.
Mowduucyo la xiriira teknolojiyada oo kan la mid ah waxaad kala socon kartaa bogeena kale ee http://www.casriga.com
Mareykanka: Soomaali dil loogu geeystay magaaladda Columbus ee gobalka Oohaayo
Iskuul ku yaala Denmark oo ardeyda u kala qebiyey Deenis iyo ajaanib
Soomaali u hanjbtay soomaali kale oo diinta masiixiga qaatay